တဦးတည်းညွှန်ကြားချက်အပေါ်တစ်ခုမှာ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan တဦးတည်းညွှန်ကြားချက်အပေါ်တစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
သငျသညျကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုကြောက် Are?သင်အမြဲလက်ျာစကားလုံးရွေးချယ်ဖို့မည်ကဲ့သို့မသိကိုမကျေနပ်သောကြောင့်နေကြတယ်?သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်"ထိုင်ဝမ်အင်္ဂလိပ်"သင့်ကိုအစဉ် haunting?တဦးတည်းညွှန်ကြားချက်အပေါ်တစ်ခုမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအလွန်အကူအညီဖြစ်ပါတယ်.သည်းခံခြင်းနှင့်စစ်မှန်ဝဲနှင့်အတူဆရာများနေ့စဉ်အသက်တာ၌လက်တွေ့ကျသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကားလက်ဆုံရန်သင့်စကားပြောတိုးတက်စေရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.ဘာ'ပင်ပိုကောင်း့တဦးတည်းညွှန်ကြားချက်အပေါ်တဦးတည်းကိုသင်ဇာတိပီ၏စကားပြောဆိုမှုယုတ္တိဗေဒဖို့အသုံးပြုရသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အင်္ဂလိပ်ဖယ်ရှားပစ်ရစေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.စို့’s ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောကြောက်ရွံ့ခြင်းဖယ်ရှား!
အဘိဓါန် Mandarin- ဆရာ